Ingobo yomlando yokuphepha - iSearch
Qala Baby & Child ukuvikeleka
Izwe ligcwele adventure ... kanye nezingozi. Ikakhulukazi uma omncane eqala ukuhlola umhlaba wabo. Ngezinye izikhathi zine-nimble kangangokuthi abazali abakwazi ukuzilandela. Okuthakazelisayo ikakhulukazi iminyaka ehambayo, lapho izingane zivele zihamba ngokuzumayo kangangokuthi zenza indlu yonke ingaphephile. Ngenkathi ungakapheli umzuzwana, ngokuvamile uvame ukubonwa: I-loud loud kanye ne-rattling, i-vase iyawela phansi. Ngenkathazo encane enjalo uzobukeka ngaphandle kwesikhulu esikhulu futhi ubeke iveni elilandelayo endaweni ephephile. Kodwa kunezimo ezinzima kakhulu ukuthi umuntu akafuni ukucabanga ngemininingwane. Yingakho abazali belulekwa kahle ukuthi baxazulule ukubhekana nokuphepha endlini ngokushesha ngangokunokwenzeka
isearch - Okthoba 26, 2017
Ekuqaleni konyaka ozayo, inkathi yokugeza ehlobo, izingane zifuna ukungena emanzini apholile. Kungakhathaliseki ukuthi idamu lokubhukuda, echibi lokugeza, echibini lokubhukuda noma echibini lokudoba, amanzi ...
Abaqaphi bezingane - ukuphepha okwengeziwe esibelethweni Kanzima ukuthi umama akesabi ukuthi kungenzeka okuthile enganeni enkulisa uma kwenzeka ...
Ukuphakama kwesihlalo ku-izindebe zomuntu wonke futhi kufanele kube semotweni ukuqinisekisa ukuthi izingane ziboshwe kahle futhi ziphakanyiswe emotweni. Ngoba ...
ukuvikeleka isearch - Juni 16, 2017 1
Ukuphepha okwengeziwe kwezingane nezingane ngokusebenzisa izihlalo zezingane Ukuphepha emotweni kuza kuqala. Noma ngabe kuyisikhathi samaholide, usendleleni uyothenga noma ...